LAMINATE VS VINYL FLOORING (UMAHLUKO-IINKONZO KUNYE NENGXAKI) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Laminate vs Vinyl Flooring (Umahluko-Iinkonzo kunye neNgxaki)
Apha sabelana ngomahluko phakathi kwe-laminate vs vinyl flooring kubandakanya i-pros & cons kunye neengcebiso eziluncedo zokukhetha olona khetho lufanelekileyo kwikhaya lakho.
Umgangatho weLaminate kunye nomgangatho we-vinyl zizinto ezimbini ekunokukhethwa kuzo xa kufikwa kumgangatho ofikelelekayo. Phakathi kobukhulu, ukukhetha umbala, ukugcinwa, kunye nokuxhalaba kwendalo, zininzi izinto eziqwalaselwayo ezimisela ukuba i-vinyl okanye i-laminate flooring kufuneka isetyenziselwe uyilo lwangaphakathi.
Ukuchonga iintlobo ezahlukeneyo zeempawu ozifunayo kumgangatho uze uthelekise amacala amabini ngecala yeyona nto ilungileyo. Ezi ntlobo zimbini zomgangatho zifana ncam, nangona kukho umahluko ophambili. Eminye yomahluko ichazwe apha ngezantsi.
amakhonkco okuzibandakanya abiza kakhulu emadodeni
Ukuba i-laminate okanye i-vinyl zombini azilungelanga iimfuno zesithuba, kukho ezinye izinto ezikhethiweyo, ezinjengomgangatho oqinileyo wokhuni oluqinileyo, oluthelekiswa esiphelweni, kwaye luqulathe umahluko ngakumbi, ngakumbi kwixabiso.
Umahluko phakathi kweVinyl kunye neLaminate Flooring
IVinyl vs i-Laminate Flooring Pros & Cons
IVinyl Plank Floor vs Laminate
Yeyiphi iVinyl engcono okanye i-Laminate Flooring
IVinyl vs Umgangatho weLaminate kunye neZilwanyana zasekhaya
IVinyl vs Wood Umgangatho vs Laminate
Umgangatho weLaminate kunye nevinyl ziindidi ezimbini zokomgangatho onokukhethwa phantse kuyo nayiphi na indawo. Amagumbi okuhlala, izindlu zangasese, iikhitshi, okanye amagumbi okulala emakhayeni, okanye nakwiindawo zentengiso zonke zinokuba likhaya le-vinyl okanye i-laminate flooring. Apha ngezantsi kukho inkcazo eneenkcukacha zezinto ezimbini kunye nolwahluko ophambili kuzo.
Ikhitshi elinombala okhanyayo we-laminate. Bona Okuninzi iintlobo zemigangatho yasekhitshini Apha.
Umgangatho olaminethiweyo yimveliso eyenziweyo, kodwa iqulethe iinkuni embindini. Laminate yenziwa ngamanqanaba amaninzi ale mveliso edityaniswe ngokudityaniswa (kulapho ifumana khona igama layo).
Inkqubo ye-lamination ibandakanya ubushushu, uxinzelelo, iwelding kunye nokuncamathelisa. Le nkqubo iyahluka ngokusekelwe kwizinto ezisetyenziswayo. Umbono olula wephepha lokulaminetha unokucinga ngalo xa ucinga malunga nomgangatho wokulaminetha.
Umgangatho weLaminate uhlala uqulethe ingqokelela yangaphakathi yentlaka kunye neebhodi zefayibha njengesixhobo 'sokugcwalisa'. I-flooring ke ilaminishwe enye, okanye amaxesha angaphezulu. Oku kongeza ukomelela, ukuzinzisa, ukugcina ubushushu kunye nokuphucula ukuvela komgangatho.
Kukho iindawo ezine ngokwendalo xa kuziwa kumgangatho wokulaminetha: Umaleko wangasemva, okhusela ukufuma, isiseko kamva, esingumxholo wangaphakathi okhankanywe apha ngasentla, umaleko woyilo, oyifoto enemibala ebekwe kwiiplanga, kwaye ekugqibeleni Umaleko wokunxiba, yiyo le nto edityanisiweyo ngokudibeneyo, ekhusela ngokuchasene nebala, ukuphela kunye nokutsha.
IVinyl yintlaka eyenziwe ngokwenza iipolymerizing iikhompawundi ze-vinyl. Ngamagama alula, i-vinyl flooring nayo iyimveliso eyenziweyo, yiyo loo nto i-laminate kunye ne-vinyl flooring zihlala zithelekiswa. IVinyl, nangona kunjalo, yenziwe ngokupheleleyo.
Umgangatho weVinyl unokuza ngamashiti, iithayile okanye iiplanga. Iphepha le-vinyl lide lifike kwi-6 yeenyawo ukuya kwi-12 yeenyawo ububanzi, oku kulungile ukumelana namanzi kwaye kulula ukuyifaka ngenxa yexabiso eliphantsi lemigangatho ekufuneka yenziwe. Iithayile zeVinyl zii-intshi ezili-9 nge-intshi ezi-9 okanye ii-intshi ezili-12 ngo-12 intshi. Iithayile ze-vinyl zihlala zilinganisa iithayile zeceramic. Iithayile ezindala zevinyl kufuneka zisuswe kwaye zibuyiselwe ngononophelo njengoko zihlala ziqukethe izinto zeasbestos.
IVinyl intle xa isiza ekuzinzeni kweenyawo, kodwa ayomelele xa imithwalo enzima okanye izinto ezibukhali. Ngelishwa i-vinyl inokukhupha i-VOCs zerhasi (iVolatile Organic Compounds) emva kokuba ifakiwe. Ezi zinemichiza enokujika ibe ngumphunga kubushushu begumbi.
-Ivinyl inokuza kwimakhishithi, iithayile okanye iiplanga, i-laminate ngokwesiqhelo ziiplanga kuphela.
-I-Laminate ikulungele ngakumbi ukuhamba kuyo, ubukhulu kunye nobushushu bungcono xa ungaphantsi kweenyawo.
-Ivinyl inokumelana okungcono kokufuma, ke ngoko kunokuba lukhetho olungcono kumagumbi okuhlambela okanye ekhitshini.
-Ilaminate inexabiso eliphezulu lokuthengiswa kwakhona.
-Ilaminethi inembonakalo yendalo ngokuthelekiswa nevinyl. Funda ngakumbi malunga iinkuni jonga iithayile Apha.
Ukuzinza -Ivinyl inokuba ikhathalelwe ngokuchanekileyo. Ukutyeba kweengubo zokunxiba kumgangatho we-vinyl, kokukhona kuya kubakho ukuzinza komgangatho.
iilokhwe zokunxiba emtshatweni njengendwendwe
Into evikela amanzi - IVinyl ngumgangatho ongangeni manzi, olungele iikhitshi kunye neendawo zokuhlambela. (Ukufumana ezinye izimvo funda malunga Umthi ongangeni manzi wezindlu zangasese kweli phepha.)
Ukufakwa -Imigangatho yeVinyl kulula ukuyifaka, kwaye inokwenziwa rhoqo njengoko uyenza ngokwakho. Ezi zifumaneka nakwiziqwenga ezilula! Ukufakela konke okufuneka ukwenze: nqanaba lokulayishwa, cola naziphi na iziqwenga (ngemela eluncedo, akukho sarha ifunekayo), susa inkxaso, ubeke iiplanga, emva koko usebenzise iroller ukunceda ukuqinisa ibhondi kulwakhiwo.
Ixabiso -Ixabiso lomgangatho wevinyl lifikeleleke kakhulu! Ngokwesiqhelo i-vinyl iphakathi kwe- $ 2 kunye ne- $ ngonyawo wesikwere. Iphepha le-vinyl libiza ngaphantsi kuneeplanti ze-vinyl zexabiso, kwaye uphawu ngalunye luya kwahluka, kodwa oko kusathethwa, i-vinyl ibiza kakhulu kwiibhodi zonke, kubandakanya ukufaka, kunye nokugcinwa.
Ukususwa -Ukususa i-vinyl flooring kunzima kakhulu. Oku kunokwenziwa, kodwa kuninzi ukukrazula nokukhuhla okuya kufuna ukwenziwa. Ukusebenzisa izixhobo zokukrola kunye namanzi anesepha kunokunceda ukususa iziqwenga zeglue ezinamathele ekubekweni phantsi.
Ulondolozo -Imigangatho yeVinyl kunokuba nzima ukuyigcina icocekile, zininzi iindlela zokukhusela ekufuneka zilandelwe. Umzekelo, ukusebenzisa iiragas okanye i-scrubbers ezirhabaxa kufuneka kuthintelwe njengoko kuya kudiliza umhlaba. Sebenzisa i-ammonia, i-wax kunye nezinye izinyibilikisi nazo zinokudambisa kwaye zonakalise umgangatho we-vinyl. Ngenye indlela umntu kufuneka asebenzise imop mop eyomileyo kunye neviniga kunye nomxube wamanzi ukucoca imigangatho.
Umgangatho -Umgangatho weeplanga ze-vinyl unokuhluka kakhulu kwimveliso ukuya kwimveliso, kwaye oko kunokuba nzima kubathengi xa bezama ukukhetha imveliso abayisebenzisayo. Ukwazi ukutyeba kubaluleke kakhulu xa ucinga ngomgangatho weeplanga ze-vinyl. Ubukhulu bubaleka ukusuka kwi-2 mm ukuya kwi-8 okanye ngaphezulu mm ubukhulu. Ukujiya kweziqwenga, kokukhona kuya kuhlala ixesha elide.
Inkangeleko yokuBonakala kunye nokukhethwa - Umgangatho olaminethiweyo unokwenziwa phantse kuwo nawuphi na umbala okanye iphethini onokucinga ngayo. Kuba i-laminate flooring yenziwa ngokubandakanya ifoto okanye umfanekiso wento elaminethiweyo kwiziqwenga, unokuprinta kakhulu kuyo nantoni na apho. Ngokwesiqhelo umntu ukhetha ukujongwa komthi, okanye ukubonakala kwelitye njengezo zinomdla kakhulu. Ngenye indlela kwezinye iindawo kukho iindlela zokongeza ukugqitywa kwesiko kwezi.
Ixabiso - Umgangatho weLaminate kukhetho olufikelelekayo, ukuba lukhethwe ngokuchanekileyo, ngelixa kukho iziqwenga ezibiza kakhulu, zininzi izinto onokukhetha kuzo kwiprojekthi enobuhlobo. I-Laminate ingaba naphi na ukusuka kwi- $ 1 ngeenyawo zenyawo nganye ukuya kwii-5 zeedola ngeenyawo.
Ukufakwa -Ukufakelwa komgangatho we-laminate kulula kakhulu, kunika indlela yokunciphisa iindleko ngokwenza ngokwakho! I-laminate yenziwe njengomgangatho odadayo, oko kuthetha ukuba akukho glu, endaweni yoko usebenzisa ulwimi kunye ne-groove okanye i-snap kunye neendlela zokutshixa zokudibanisa i-flooring kunye.
Ukumelana nobushushu - Umgangatho weLaminate uneempawu ezichaseneyo nobushushu. Oku kuyenza ukuba ikwazi ukufakelwa ngaphezulu kweenkqubo zokufudumeza radiant. Esi sesinye sezinto ezimbalwa ezinokufakwa ngaphezulu kwento enjalo. Oku kunika ukutyibilika kwemvakalelo efudumeleyo kwaye kulungile kumagumbi okuhlambela nakwamagumbi okulala ebusika njengoko unokubuguqula ubushushu kancinci ukuze ugcine iinyawo zakho zishushu.
Ukuhlaziya - Umgangatho olaminethiweyo awunakuphinda ugqitywe. Oko kuthetha ukuba ufumana umpu omnye kukhetho lombala kunye nokunxiba. Xa i-laminate iphelelwe yisikhathi okanye igugile, kufuneka inyuswe ngokupheleleyo kwaye kufuneka into entsha ibekwe phantsi. Ngethamsanqa, ayibizi ngokuhlekisa, inokuthi ikhutshwe ngokulula.
Umgangatho -Umgangatho womgangatho we-laminate, ofana nomgangatho we-vinyl, unokuhluka kakhulu kwimveliso ukuya kwimveliso. Oku kudala ubunzima phakathi kwabathengi xa bezama ukukhetha imveliso abayisebenzisayo. Ukwazi i-AC (i-Abrasion Criteria) ibaluleke kakhulu xa ucinga ngomgangatho we-laminate flooring. Izinketho zidweliswe apha ngezantsi:
I-AC1-isetyenziselwa iindawo zokuhlala ezisezantsi, ezinje ngezindlu zangasese okanye ii-closets
I-AC2 - isetyenziselwa indawo yokuhlala ngokubanzi, enje ngamagumbi okuhlala kunye namakhitshi
I-AC3 - isetyenziselwa iindawo zokuhlala ezinzima, ezinje ngee-bnbs okanye i-sorority / amakhaya amaqabane
AC4 -isetyenziselwa izithuba eziqhelekileyo zorhwebo, ezinje ngeeofisi okanye amashishini amancinci
I-AC5 - isetyenziselwa iindawo ezinzima zorhwebo, ezinje ngononophelo lwempilo okanye iivenkile
ndiyakuthanda ucaphula ntombazana
Amaxabiso ahlala enyuka kunye nokulinganiswa kwe-AC, njengokuqina. Ukuqinisekisa ukuba uyazi ukuba ufuna ntoni kuya kukunceda uqiniseke ukuba ufumana umlinganiso olungileyo kunye nomgangatho womgangatho wexabiso elifanelekileyo.
Ukuhlala: IVinyl inokuqina okuphezulu kwaye ihlala ihlala iminyaka eli-15 okanye nangaphezulu. Ukongeza amanye amacwecwe e-urethane kunokwandisa oko nangakumbi. Ubungqingqwa beelokhwe zokunxiba buza kunceda ekuboneni ukuhlala ixesha elide kuhlobo ngalunye lomgangatho.
I-Laminate ikwanokuqina okuphezulu, okuhlala ukusuka kwi-10 ukuya kwi-20 iminyaka ngokuxhomekeke kumgangatho. I-Laminate ineentlobo ezininzi zokutyibilika onokuzifumana, nganye ineendlela ezahlukeneyo zokurhabaxa. Ngasentla, kukho uluhlu lwecandelo ngalinye kunye nento ekufuneka isetyenziselwe yona.
Isondlo: IVinyl ihlala ifuna kuphela ukutshayela okuqhelekileyo kunye nomgangatho wokubonelela ngokuhambisa. Ngelishwa ayinakunkcenkceshelwa okanye ilungiswe, iplanga liphela kufuneka lisuswe lifakwe endaweni yalo. Kwiimeko ezininzi, nangona kunjalo, akukho nto ininzi eyakwenzeka ukutshabalalisa i-flooring kwindawo yokuhlala eqhelekileyo.
I-Laminate ikwafuna kuphela ukutshayelwa okusemgangathweni kunye nokuhanjiswa okuqhelekileyo kokuhanjiswa. Ayikwazi ukumelana namanzi amileyo okanye iimpembelelo ezigabadeleyo nangona. Xa kufuneka ukukopisha, ukusebenzisa i-damn mop yeyona nto ilungileyo, nawaphi na amanzi amileyo anokungena ngaphakathi kwaye angene kumbindi womthi. I-Laminate ayinakulungiswa, kodwa umaleko wokunxiba unokutshintsha.
Iindawo eziphezulu zezithuthi: Umgangatho ophezulu we-vinyl flooring uya kuthamba phantsi kweenyawo kwaye uhlale ixesha elide.
Kwiindawo ezimanzi: IVinyl Floor, njengoko ingafaki manzi.
Ukucoca: Umgangatho weVinyl, njengoko usenza unokubuyisa amanzi, ngokungafaniyo ne-laminate, ethatha amanzi.
Kwimpembelelo yokusingqongileyo: Umgangatho weLaminate, njengoko i-laminate iqulethe iziko lendalo ngokungafaniyo nevinyl.
Zombini ezi zinto zinobubele kwizilwanyana zasekhaya! Oko kwathiwa, lo mgangatho ungonakaliswa zezinye izilwanyana, kodwa zincinci kakhulu kunolunye ukhetho lomgangatho, ngakumbi umgangatho wokhuni. Ukushiya umchamo wezilwanyana kwi-laminate okanye i-vinyl kungonakalisa i-flooring, kodwa kukho ixesha elincinci lokuyicoca ngaphambi kokuba yenzeke.
Ukucoca iinwele kunye ne-pet dander kulula kwi-vinyl kunye ne-laminate flooring kunokuba, yithi, carpeting. IVinyl kunye ne-laminate zinokukrwitshwa ngozipho, kodwa kunokwenzeka ukuba ziphinde zibuye kwakhona kuneplanga lomthi.
Ukongeza umgangatho wokhuni kumxube wongeza uninzi lweempawu ekusebenzeni.
Izixhobo: Umthi onzima u-100% womthi oqinileyo ogqibeleleyo. I-Laminate yinxalenye yomthi, kwaye i-vinyl yi-0% yeenkuni! Ngenxa yezi zinto zokwakha iinkuni kunye nokwambathisa i-laminate akufuneki ukuba zibekho kwiindawo ezimanzi okanye zicocwe ngamanzi amileyo. IVinyl kwelinye ibinokuphanjwa rhoqo xa kufuneka njalo.
Ukuqina / ixesha lokuphila: Ngelixa i-laminate kunye ne-vinyl zingaphila ukusuka kwiminyaka eyi-10 ukuya kweli-20, ukutyibilika kweenkuni kunokuhlala ixesha elide. Nokuba umgangatho weenkuni wonakele okanye ugugile, izinto ezinokufakwa kwisanti zize zicokiswe. Hayi kanye nokuba inye, inokucocwa kwakhona ngamaxesha amaninzi ukuba unqwenela njalo.
Ixabiso lokubuyisela / Ixabiso: Ngexabiso lokuqala liza nexabiso lokuthengisa kwakhona, i-laminate kunye ne-vinyl zombini zinokukhethwa okunokufikeleleka kakhulu xa kufikwa kumgangatho wokubukeka komthi. Kodwa ababoneleli ngexabiso elikhulu lokuthengiswa kwakhona. Ngokusekelwe kwiintlobo kunye neentlobo zeenkuni i-hardwood flooring ekhethiweyo ekhethiweyo ingaba ukusuka kwi-4 ukuya kwi-12 yeedola ngeenyawo. Ngenxa yexabiso lokuqala kunye neempawu ezintle, ixabiso elongezayo ekhayeni lingaphezulu kwelaminethi kunye nevinyl.
Ukufakwa: Zombini i-vinyl kunye ne-laminate flooring zilula kakhulu ukuyifaka, kwaye zinokwenziwa nge-avareji yasekhaya efanelekileyo yenza ngokwakho. Umgangatho oqinileyo weplanga kwelinye icala awulunganga kubangasebenzi. Kukho iqela lezixhobo ezikhethekileyo ezifunekayo ukufaka. Isanding kunye nokugqiba nako kufuneka kugqityiwe kunokuba nzima ngokwakho. Umgangatho wokhuni kufuneka ufakwe ziingcali.
Funda ngakumbi malunga laminate vs umthi onzima Apha.
Izimvo zokuqala isikhumbuzo somyeni
umtshato wokuqala iingoma zomdaniso 2020
Izipho zekrisimesi zabazali besoka